Recovery ကို install လုပ်ပြီး LG G3 international model (သို့) D855 model ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ PC အတွက်မလိုဘဲ။
LG developer conference သည် G5 အတွက်တည်ဆောက်မှုပုံစံများကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်
LG G5 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတတိယပါတီ developer များမှထုတ်လုပ်ရမည့် modules များနှင့်အတူကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
LG မှ K5 နှင့် K8 တို့ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
ယခုအပတ်မှထွက်ရှိလာသည့် LG ဖုန်းသစ်နှစ်မျိုးဖြစ်သော K5 နှင့် K8 ။ ပထမတစ်ခုမှာ Android 5.1 Lollipop နှင့်ဒုတိယမှာ Marshmallow ဖြစ်သည်
LG Tone Platinum ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကိုစမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်၎င်း၏ပြီးမြောက်မှုအရည်အသွေးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် LG Rolling Bot ဖြစ်သည်။ BB-8 နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ 8 megapixel ကင်မရာဖြင့် Android ဖုန်းဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။
LG 360 CAM, ငါတို့သည် LG ၏ 360 ကင်မရာကိုစမ်းသပ်ပြီး
LG 360 CAM VR အိတ်ဆောင်ကင်မရာကို ၄ င်း၏ ၁၃ မီဂါပစ်ဇယ်မှန်ဘီလူးများကြောင့် virtual reality ပုံရိပ်များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
LG Cam Plus Grip သည်ဤအရာသည် LG G5 ကင်မရာ module ဖြစ်သည်
LG Cam Plus Grip သည် LG G5 ကင်မရာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် module တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
ဗီဒီယိုထဲမှာ LG G5 ရဲ့ modules တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
LG G5 နှင့် Xiaomi Mi5
ပထမ ဦး ဆုံး modular smartphone LG G5 နှင့် MWC တွင်မြင်တွေ့ရသည့်အံ့မခန်းဖွယ် Xiaomi Mi5နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်။
LG G4 နှင့် LG G5 တို့ဖြစ်သည်
လာမည့်ပို့စ်တွင် LG G4 VS LG G5 နှင့်နောက်ဆုံး terminal နှစ်ခုကိုပထမဆုံးနှိုင်းယှဉ်ပြသမည်။
LG G5 နှင့် Galaxy S7 သည် Android Marshmallow ၏ 'Adoptable Storage' ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
Android 6.0 Marshmallow တွင် "Adoptable Storage" ဟုအမည်တပ်ထားသော LG G5 နှင့် Galaxy S7 မှအထောက်အပံ့မပေးပါ။
LG G5 နှင့် MWC16 တွင်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှု၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
ဘာစီလိုနာရှိ MWC16 မှ LG G5 နှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြင့်သင့်အားဤဗီဒီယိုကိုချန်ထားပါသည်။
LG သည်အထူး LG G5 နှင့်အတူပထမဆုံး modular စမတ်ဖုန်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
LG K8 သည် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Android5Marshmallow ဖြစ်သည်
LG က K8, ၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Android5Marshmallow ပါသည့်ဖုန်းကိုတိတ်တဆိတ်ကြေငြာခဲ့သည်
LG Stylus2တွင် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Android 5,7 နှင့် metal frame တို့ပါရှိသည်
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် LG သည် Stylus2ကိုအထူးဖုန်းအဖြစ် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုမှုအဖြစ်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ယိုစိမ့်မှုက LG G5 တွင်ဒုတိယမျက်နှာပြင်ရှိသည်ဟုဆိုထားသည်
V10 ကဲ့သို့ LG G5 တွင် @evleaks ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်များအရအလယ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
LG Pay ကိုနှောင့်နှေးနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှာပြသမှာမဟုတ်ပါဘူး
, LG က၎င်း၏မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်သော LG Pay ကိုစတင်ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှာ LG G2016 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ဒုတိယသုံးလပတ်အထိဖြစ်သည်။
မတ်လတွင် LG တွင် X Camera နှင့် X Screen အသစ်များပါ ၀ င်လာမည်။ MWC တွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
LG G5 နှင့် Samsung Galaxy S7 ကိုတင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤဖုန်းနှစ်မျိုး၏ထူးခြားချက်များစွာရှိသည်
LG G5 သည် 4GB RAM နှင့် Snapdragon 820 နှင့်အတူ Geekbench တွင်ပေါ်လာသည်
LG G5 ကို Geekbench တွင် 4GB RAM နှင့် Snapdragon 820 ပရိုဆက်ဆာတို့ပါဝင်သည်။
LG က LG G5 အတွက် Quick Cover ကိုကြေငြာလိုက်သည်
LG G5 ၏ Quick Cover ကိုမျက်နှာပြင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကကြေညာခဲ့သည်။
LG သည် G5 ၏စာသားကိုအမြဲတမ်း on the teaser တွင်တင်ပြသည်
G5 မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် MWC ရှိ LG ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းမည့်နက်နဲသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
LG G5 ၏နောက်ပုံရိပ်များသည်နောက်ကင်မရာကိုပြသထားသည်
ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် Mobile World Congress တွင် LG G21 ကို LG G5 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်တင်ဆက်မည့်အချိန်တွင် LG သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောချိန်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်
LG G5 ၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်ကို Samsung Galaxy S7 မတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် LG ၏ G21 နှင့် Samsung Galaxy S5 နှစ်ခုလုံးသည်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကြားနာရီနှင့်ကွာခြားမှုကိုပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
LG V10 ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင် ၆၂၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသော Fernando Torres ၏လက်ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်
LG သည်ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး LG V10 ကိုပြသခဲ့ပြီး၎င်းကိုယူရို ၆၉၉ ဖြင့်ရောင်းချပေးသည်
LG သည် K high စီးရီးအသစ်၏ပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကိုပြသသည်။
LG K4 ကိုတရားဝင် LG ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
LG K4 သည် K အကွာအဝေးရှိဖုန်း ၅ လုံးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်အမျိုးမျိုးသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်
LG G5 ၏ဒီဇိုင်းနှင့် dual camera
အသစ်ထွက်ပေါ်လာသော LG G5 Images သည် LG Flagship ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာနှစ်မျိုးကိုအတည်ပြုသည်
LG သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်း ၅၉.၇ သန်းရောင်းချခဲ့ရပြီး၊
LG G5 ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ကင်မရာနှစ်ဆရှိမည်လား။
LG G5 ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံရိပ်များသည်အနောက်ဘက်ကင်မရာအပြင်အခြားဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးအပြီးသတ်မှုများကိုပြသထားသည်။
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအခြားကြီးမားသောဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက LG V10 သည်စမ်းသပ်မှုများအရတိုင်းတာ။ မရပါ
LG G5 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည့် LG ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းအပြင်ဒီဇိုင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
LG က K4, K5 နှင့် K8 စမတ်ဖုန်းများထွက်ပေါ်လာပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်
LG သည် Las Vegas ရှိ CES တွင်ကြေငြာခဲ့သော K-series ဖုန်းသုံးလုံးကိုထုတ်လုပ်မည် - K4, K5 နှင့် K8 ။ သူတို့က K7 နှင့် K10 ဟုကြေငြာခဲ့သည်
ဒီဟာက LG G5 ရဲ့ဒီဇိုင်းလား။
LG G5 ၏ဒီဇိုင်းကိုပြသသည့်ပြန်ဆိုချက်များသည်၎င်း၏ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေလိမ့်မည်
ဒီနေ့တစ်ဆင့်ချင်းအဆင့်မြင့်ဗီဒီယိုအသစ်တွင်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိသည့် LG G3 ကို Android 6.0 ၏တရားဝင် LG firmware သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုသင်ပြပါ။
LG က CES 2016 တွင်စျေးသက်သာသည့် K series စမတ်ဖုန်းများကိုကြေညာခဲ့သည်
LG မှာဈေးသက်သာတဲ့စျေးနှုန်း၊ အစိတ်အပိုင်းကောင်းတွေနဲ့ဒီဇိုင်းကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် K Series အသစ်တစ်ခုပါ
Android 6.0 Marshmallow ကိုပိုလန်နိုင်ငံရှိ LG G3 တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်က၎င်း၏ Facebook မှတရားဝင်ဖြစ်သည်။
LG G5 ကို ၂၀၁၆ ပထမသုံးလပတ်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး V2016 နှင့် G10 တို့တွင်ပထမမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့သောအချို့မျက်နှာပြင်များပါရှိမည်ဖြစ်သည်။
SmartThinQ Hub သည်သင်၏အိမ်အတွက် smart ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည့် LG မှအသစ်ဖြစ်သည်
SmartThinQ Hub သည်သင်၏ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အသိပေးအချက်အချာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
LG က ၄၅ ရက်အတွင်းမှာယူအက်စ်မှာ ၄၅၀,၀၀၀ ရောင်းအားယူအက်စ်မှာရောင်းပြီလို့ပြောပါတယ်
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် LG သည် V450.000 ၏ ၄၅၀,၀၀၀ ကို ၄၅ ရက်အတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ သူကငါတို့နှင့်အတူမျှဝေကြောင်းကြီးမားသောနံပါတ်များကို။
LG G5 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ထုတ်ထားပါသည်
LG G5 အကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါးသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီယိုစိမ့်မှုအသစ်နဲ့အတူကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူရဲ့ဒီအထင်ကရသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ။
LG G3 ကို Android 6.0.1 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဒီနေ့မှာ CM3 ညအိပ်မက်တွေကြောင့် LG G6.0.1 ကို Android 13 Marshmallow ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးဗီဒီယိုတစ်ကားဖြင့်ပြသပါမည်။
LG G Pad II 8.3 LTE သည် Stylus နှင့် USB port ပါသည့် Android tablet သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
လာမည့်လတွင် LG G Pad II 8.3 LTE အသစ်ကိုကိုရီးယားတွင် Stylus pen နှင့် USB support အပြည့်ဖြင့်ကိုရီးယား၌ဖြန့်ချိမည်။
LG G5 နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသည်။ fingerprint sensor နှင့် Snapdragon 820 SoC ပါးလွှာသည်
LG G5 နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ LG ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် MWC 2016 တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချရန်ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သော LG Zero အသစ်အတွက်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း။
LG က LG Ray ကို ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ပြီး 5,5G စျေးကွက်ကိုအာရုံစိုက်သည်
3G စျေးကွက်သည်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသောဤဖုန်း၏ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကင်မရာနှင့်ချစ်ပ်တွင်တည်ရှိသည်။
[APK] LG G3 အတွက် AOSP Roms တွင် Quick Circle ကို enable လုပ်နည်း။
LG G3 ပေါ်ရှိ Roms AOSP တွင် Quick Circle လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမည်သို့မည်ပုံဖွင့်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကတော့ XenonHD လို့ခေါ်တဲ့ AOSP Rom ဖြစ်တယ်
XenonHD လို့ခေါ်တဲ့ Cyanogenmod3ကိုအခြေခံပြီး AOSP Rom LG G855 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D12.1 အတွက် Rom ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်။
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom: NovaStock အံ့သြဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီ
ဒီနေ့ LG G3 international model အတွက် d855 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကိုတပ်ဆင်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်
Xenon HD အဖွဲ့၏ကျေးဇူးကြောင့် LG G6.0, D3 ကို Android 855 တွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Android 6.0 ကို LG G3 တွင်ယနေ့စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုပါက Roma Marsmallow ကိုတစ်ဆင့်ချင်းမည်သို့ flash လုပ်ရမည်ကိုပြသသောကြောင့်သင်ကံကောင်းသည်။
ကိုရီးယား LG G4s များသည် Android 6.0 ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
ကိုရီးယား LG G4s များသည် Android 6.0 M, Google ၏နောက်ဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းကို update ကိုလက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်သည်
ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော LG G3 Flex မှလာမည့်နှစ်တွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
LG G2 VS Oneplus VS Mi4c ကိုစမ်းသပ်ပါ
ဒီအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုမှာစမ်းသပ်တဲ့အက်စီးသုံးခုကိုတွေ့ရတဲ့ LG G2 VS Oneplus VS Mi4c
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G2 VS Oneplus 2
LG G2 VS Oneplus ၂ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့် Androidsis အမြန်နှုန်းအသစ်စမ်းသပ်မှုကိုမည်သူနိုင်မည်နည်း။
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G2 VS Xiaomi Mi4c
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအသစ်သည် LG G2 VS Xiaomi Mi4c နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဘယ်သူကဒီစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရမှာလဲ။
အကယ်၍ သင့်တွင် rooted LG ရှိလျှင်သင် Android 6.0 ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
XDA မှယောက်ျားလေးများသည်အခမဲ့ LG G4 အသုံးပြုသူများကို Android 6.0M သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
လာမည့်အပတ်တွင် LG G6.0 သည် Android4Marshmallow ကို LG GXNUMX တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီးကျန်ဒေသများသည်လည်းကျန်ဒေသများဖြစ်သည်။
LG ၏နောက်ဆုံးပေါ် Android 6.0 Marshmallow သို့နောက်ဆုံးသတင်းများအရ LG G2 တွင်ထပ်မံပါဝင်သည်မှာကောလဟာလဖြစ်သည်။ လူအများစုက၎င်း၏သမိုင်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်ခဲ့သောအကောင်းဆုံး Android terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
LG V10 တွင်ဒုတိယဖန်သားပြင်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်သတိပေးချက်များ၊ စာများနှင့်အခြားအရာများရရှိသည်။
LG Watch Urbane ၏ဒုတိယမျိုးဆက်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးစမတ်ဖုန်းမှလုံးဝလွတ်လပ်သောစမတ်နာရီဖြစ်လိမ့်မည်။
LG Class အသစ်၏ရှေ့ကင်မရာသည် LG G4 နှင့်တူညီသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် selfies ဓါတ်ပုံများအတွက်အထူးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG G Pad II 10.1 LG သစ်တက်ဘလက်အသစ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်
LG G Pad II 10.1, LG ၏တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သောအပြီးသတ်စျေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုအပြည့်အဝဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ၎င်းသည်ယူရို ၆၀၀ အောက်သာရှိသည်။
LG Rolly ကီးဘုတ်၊ ကျွန်ုပ်သည် LG ၏ကြိုးမဲ့နှင့် roll-up ကီးဘုတ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
LG Rolly, LG ရဲ့ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်အသစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းဒါကိုလက်လွတ်မသွားဘူးလား။
LG Nexus 2015 သည် RAM3GB၊ Snapdragon 808 နှင့် 2700 mAh ပါဝင်သည်
LG မှထုတ်လုပ်သော ၂၀၁၅ Nexus terminal ၏အနာဂတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလအသစ်များထွက်ပေါ်လာသည်။
LG Watch Urbane Luxe သည် ၂၃ ကာရက်ရှိရွှေစမတ်နာရီတစ်လုံးလျှင်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ဖြစ်သည်
LG Watch Urbane ၏အထူးထုတ်ဝေမှုသည် ၂၃ ကာရက်ရှိရွှေနှင့်ယူအက်စ် ၅၀၀ အတွက်ဒေါ်လာ ၁,၂၀၀ တန်ဖိုးရှိ Luxe ထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖြစ်သည်။
LG က G Pad II 10.1 ကို Snapdragon 800 chip, 2GB RAM နှင့် 1920 × 1200 resolution ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
IFA ပြပွဲတွင်တောင်ကိုရီးယားမှ LG က၎င်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော Snapdragon 10.1 chip နှင့် 800GB RAM ပါဝင်သည့် G Pad II2တက်ဘလက်ကိုပြသမည့်ပွဲဖြစ်သည်။
NUCLUN 2, LG ၏ SoC အသစ်သည် Samsung ၏ Exynos 7420 ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်
NUCLUN2၏အခြေခံစံနှုန်းများ Samsung LG Exynos အကွာအဝေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်သော LG မှထုတ်လုပ်သည့် SoC အသစ်ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
Nexus5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - သတ္တုကိုယ်ထည်၊ ၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်၊ ရှေ့စပီကာများ၊ လက်ဗွေဆင်ဆာနှင့် USB Type-C တို့ဖြစ်သည်
LG ရဲ့ Nexus5ကိုစတင်တည်ထောင်နေပြီဖြစ်ပြီးဒီသတင်းဟာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။
LG G4 Plus Drone သည် LG G4 ကင်မရာ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်
ယနေ့တွင်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှ LG G4 ကင်မရာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဤဗွီဒီယိုအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
LG G4 Beat သည် ၅.၂ လက်မဖန်သားပြင်နှင့် Snapdragon 5,2 ချစ်ပ်တို့ဖြင့်ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
LG G4 Beat (သို့) G4s များသည်အထဲမှာအလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းရန်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူအတွက်အသစ်သောလောင်းကြေးဖြစ်သည်။
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G2 နှင့် LG G4
ဒီနေ့ Androidsis speed test မှာ LG G2 VS LG G4 နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ အဆိုပါ fratricidal duel အဘယ်သူသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G3 VS LG G4 နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု
ဒီပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင် LG G4 သည်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးသော Android terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်သည်။
LG G Pro3မှအချက်အလက်များပိုမိုပေါက်ကြားလာသည်
ကိုရီးယားများကသူတို့၏ LG G Pro ထုတ်ကုန်သစ်၏ဗားရှင်းသစ်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ၎င်းသည်တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကို LG G Pro3ဟုခေါ်လိမ့်မည်။
LG ဆိပ်ကမ်းအားလုံးတွင်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးအပေါက်တစ်ခု။ အားလုံးမော်ဒယ်များနှင့်ဗားရှင်း !!
ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ၏ပုံစံများနှင့်ဗားရှင်းများအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော LG ဆိပ်ကမ်းအားလုံးတွင်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးအပေါက်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စိတ်လှုပ်ရှား !! LG G30 အတွက် Rom Evomagix Stock 2E တရားဝင် Lollipop !!
ယနေ့ငါကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ထားခဲ့ပါသည် LG G30 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom Lollipop၊ Rom Evomagix Stock 2E ဖြစ်သည်။
LG က Band Play စမတ်ဖုန်းကိုကြေငြာပြီးအသံအရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်သည်
LG Band Play သည် 1W စပီကာများနှင့် LG QuadBeat3နားကြပ်နှင့်အတူအသံအာရုံစိုက်သည့်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။
LG G4 Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှထုတ်ကုန်အသစ်သည်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ ၎င်းသည်လာမည့် LG G4 Pro ဖြစ်သည်။
LG G4 ChelozTeam UX2အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် LG G4.0 သည် Awesome !!
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Port LG G4 ကို LG G2 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြံဥာဏ်ပေးသည်
LG G4 သည်အနိုင်ရရှိမှုအားလုံးနှင့်အတူ terminal တစ်ခုကဲ့သို့ထင်ရသည့်အချက်သည်၎င်း၏ touch screen တွင်ပြproblemsနာများရှိနေသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာမင်းကိုငါတို့ပြောမယ်
[ဗီဒီယို] LG G2 ၏တရား ၀ င်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ Lollipop Rom ကိုပြန်လည် flash လုပ်ရန်
အောက်ပါသင်ခန်းစာတွင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုဖြင့် LG G2 တွင်တရားဝင် Android Lollipop Rom ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရောင်ပြန်ဟပ်ရမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့မွမ်းမံနည်း
ယနေ့ငါ LG G2 ကို Android 5.1.1 Lollipop သို့မွမ်းမံရန်နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နည်းစနစ်များအားသင်ကြားပေးခြင်းအပြင်အကောင်းဆုံး Rom ကိုအကြံပြုပါသည်။
LG G4 အက်ပလီကေးရှင်းများ LG G2 တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
အောက်တွင်သင့်အား LG G4 တွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက် LG G2 ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးနှင့်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံစေရန်သင့်အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့ငါ LG G2 အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြသည်။ Stock Kit Kat Rom ကိုမည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။
LG G4 ၏စျေးနှုန်းသည်သိသိသာသာမြင့်ပြီး Android အကွာအဝေးတစ်ခုလုံး၏စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဈေးသည်ယူရို ၆၄၉ ဖြစ်သည်။
LG G4 Compact, အလယ်အလတ်တန်းစားများအတွက်ဗားရှင်း
LG G4 Compact သည်တောင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏အလယ်အလတ်တန်းစား Android အတွက်အထင်ကရဗားရှင်းဖြစ်သည်။
ဒါက LG G4 ရဲ့အရောင်ရောင်စဉ်အာရုံခံကိရိယာအလုပ်လုပ်ပုံ
LG G4 ၏အရောင်ရောင်စဉ်ရောင်စဉ်အာရုံခံကိရိယာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ ၎င်းသည်သဘာဝတန်ချိန်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုကမ်းလှမ်းရန်အလင်းကိုပိုမိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG က LG G4 ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ယိုစိမ့်မှုများစွာပြီးနောက်ယနေ့နောက်ဆုံးတွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG G4 ၏အထင်ကရသစ်ကိုပြသရန်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ဖြစ်သည်။
LG က LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဆက်ပြီးဝါကြွားနေသည်
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ LG G4 ၏ဗီဒီယိုနှစ်ခုတင်ခဲ့သည်။
လာမည့်flagပြီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် LG G4 ကိုမိတ်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး terminal နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုယိုစိမ့်နေသော်လည်း၎င်း၏ကွေးသောမျက်နှာပြင်မှာကွေးကောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
LG G4 သည်အထူးမြှင့်တင်ရေးနှင့်အထူးအာမခံချက်များဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
LG သည်အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုလောင်းကစားခြင်းတွင်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင် LG G4 ကိုချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင်အပိုအာမခံချက်တစ်ခုအတွက်လောင်းနေသည်။
Stock Rom ကို Flashing လုပ်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးသွားပြီး LG G2 မှာနှစ်ချက်ပုတ်လိုက်တဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းကိုဒီနေ့ငါပြမယ်။
LG G2 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ယနေ့ငါ LG G2 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်း (သို့) Root မဆုံးရှုံးပဲအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို Evomagix မှ Rom စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ယနေ့ပြသသည်။
LG ၏ G4 သည် LG GXNUMX ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြသမည့်ရက်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။
LG G4: မထွက်ခင်သင်သိထားသင့်သမျှ (Minisite ပေါက်ကြား)
Evan Blass သည်ဟက်ကာသည်သူသည် LG G4 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော minisite တစ်ခုကိုတွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အား screenshots များကိုပြသသည်။
LG G4၊ အရောင်သစ်များ၊ အားကောင်းသောကင်မရာနှင့်များစွာသောပေါက်ကြားသောပုံရိပ်များ
LG G4 အကြောင်းကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှမည်သည့်အရာကိုတင်ဆက်ရမည်ကိုအံ့အားသင့်စရာအချက်မရှိပါ။ ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LG G3 VR - LG G3 ကိုဝယ်ယူသူများအတွက်လာမည့်လတွင် LG virtual reality မျက်မှန်များကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
ယခုလတွင်ပင် LG မှ virtual reality မျက်မှန်သစ်များဖြစ်သော LG G3 VR ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် LG G3 ဝယ်ယူသူများအတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
LG G Flex2၏နောက်ခံပုံအားလုံးကို download လုပ်ပါ
LG G Flex2၏နောက်ခံပုံများ (သို့) နောက်ခံပုံများအားလုံးကိုယခုယခုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ
Movistar ၏ LG G3s များသည်၎င်းတို့၏ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသော Android Lollipop ကို update ရရှိသည်
Movistar မှ LG G3 သည် Android Lollipop အတွက်တရားဝင် update ကိုလက်ခံရရှိပြီဖြစ်သည်
အမေဇုံကဂျာမနီစာမျက်နှာသစ်မှာ LG G Flex2ဈေးနှုန်းနဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ယူရို ၅၉၉ နဲ့ရောင်းချနိူင်ပါတယ်။
LG နှင့် Audi စမတ်နာရီတို့သည် WebOS နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
Audi အတွက်ပြုလုပ်ထားသောထူးခြားလှသော LG Smartwatch သည် WebOS နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
LG G3 ကို Android 5.0 CM12 သို့မွမ်းမံခြင်း [Model D855]
Cyanogenmod 3, CM5.0 ကို အသုံးပြု၍ LG G12 ကို Android 12 Lollipop သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်
LG G Flex2၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များကိုကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်၏လက်မှသိရှိပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏ LG G2 ကို Android 5.0 သို့ Update လုပ်နည်း
CM2 ကို ကျေးဇူးတင်၍ LG G5.0 ကို Android 12 သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ပြသပါမည်
LG G Flex 2: LG ကကမ္ဘာကြီးကို၎င်း၏ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်သားရဲကိုပြသသည်
LG ကမျှော်လင့်ထားသည့် LG G Flex 2015 ကို CES2တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကဏ္ of ၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ချီးမွမ်းဖွယ်ကောင်းသည့်စွမ်းဆောင်ရည်များရှိသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်
LG G3 သည်မွေ့ရာတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ပေါက်ကွဲသွားသည်
မယုံ။ LG G3 သည်အိပ်ရာပေါ်တွင်အားသွင်းနေစဉ်မွေ့ရာတစ်လုံးလုံးဖြတ်သန်းသွားသည်
အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့် LG G2 သို့တရားမဝင်သော Android 12 Lollipop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
LG G3 ၏အခမဲ့ဗားရှင်းမှာ Android 5.0 Lollipop ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု; ယနေ့ LG G2 VS HTC Desire 816
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ဒယ် LG G816 နှင့်ဆန့်ကျင်သောအံ့သြဖွယ် HTC Desire2နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ LG G2 VS HTC Desire 816 duel ပြိုင်ပွဲတွင်မည်သူနိုင်လိမ့်မည်နည်း။
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု: Nexus6VS LG G2
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုဖြစ်သော Nexus6VS LG G2 သည်ကြီးမားသောစျေးနှုန်း band ဖြင့်ခွဲခြားထားသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ LG G2 အားနောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပ firmware D80220H သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်။ စက်ရုံမှ Root မရှိဘဲ၊ မူလ LG Recovery stock နှင့်ထားရန် Root နှင့် Recovery နှင့်အခြားတစ်ခုကိုထားရန်နည်းလမ်းတစ်ခု။
LG G Flex2ကို CES 2015 တွင်ပြသမည်
LG G Flex2ကိုယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Las Vegas မြို့၌ဇန်န ၀ ါရီလပထမပတ်တွင်ကျင်းပမည့် CES 2015 တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
LG G5.0 အတွက် LiquiSmooth, Rom Android2Lollipop (၎င်း၏မျိုးကွဲအားလုံး)
LG G5.0 အတွက် Android2Lollipop Rom သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Android Lollipop ကိုတရား ၀ င်မွမ်းမံပြီးတဲ့နောက် LG G2 မှာပြtheနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။
[UPDATED] LG G2 ကို Android 5.0 Lollipop မော်ဒယ် D802 သို့တရား ၀ င်မွမ်းမံနည်း
LG G2 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကို EvoMagic မှ EvoMagic မှပြသသည်။
LG G Watch ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤတွင် LG G Watch ၏ဤပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ကိုတွေ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Wareable Android Wear နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုပြသခဲ့သည်။
သင်၏ LG G3 ကို Android 5.0 Lollipop (F300S model တစ်ခုတည်းအတွက်) ကိုသာသင် update လုပ်နိုင်ပါတယ်။
LG G5.0 model F3S အတွက်ပထမဆုံး Android 300 Lollipop KDZ ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အလိုရှိပါကသင်၏ LG G3 ကို Android 5.0 Lollipop သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
LG G5.0 မှ Android3Lollipop ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုတင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်း!
LG G5.0 ပေါ်ရှိ Android3Lollipop အတွက် LG ၏ကိုယ်ပိုင် UI ၏ကြောက်မက်ဖွယ် UI ပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
LG G2 Roms: Miui V5 4.10.24 LG ၏မူရင်းစတော့အိတ် D80220C ကိုအခြေခံသည်
ဤနေရာတွင်သင်၏ LG G5 အတွက် Stock D4.10.24C အပေါ် အခြေခံ၍ Miui V802202ကိုရယူရန်နှင့်ကြိုးစားရန်သင့်အတွက်ဗွီဒီယိုနှင့်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရှိသည်။
LG G Watch R ကိုယခုအခါ Amazon Spain တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
အမေဇုံစတိုးတွင် LG G Watch R တပ်ဆင်ထားသောယူနစ်များရှိပြီး၎င်းသည်အပြည့်အဝလည်ပတ်နေသောဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်ပထမဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်သည်။
LG F490 L, NUCLUN ပရိုဆက်ဆာပါသည့် LG ၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း
LG မှထုတ်လုပ်သော NUCLUN ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော LG F490 L ၏စရိုက်လက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
နောက်ပြီး LG G2 မှာ RAM ကိုလွှတ်ပေးဖို့ရိုးရိုးလေးလှည့်ကွက်တစ်ခုပြပါမယ်။ 150Mb လောက်ပိုကြီးတဲ့ RAM ပါ။
ဤတွင်သင့်တွင် Nexus6နှင့် LG G3 အကြားနှိုင်းယှဉ်ချက်ရှိသည်၊ ငွေတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ LG G2 ကိုစက်ရုံမှမည်သို့စွန့်ခွာရမည်နည်း
သင်၏ LG G2 ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမလိုဘဲရှုပ်ထွေးသောလျှပ်တပြက်ကိရိယာများကိုမသုံးဘဲစက်ရုံမှထွက်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဤတွင်သင့်တွင်ရှိသည်။
LG G2 ကို Android 4.4.2 တွင် Root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုမည်သို့ Install ရမည်နည်း
ဒီနေရာမှာ TWRP Recovery ကို install လုပ်နိုင်ဖို့ Android2မှာ Root LG G4.4.2 ကို install လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ PC ကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲ LG G2 မော်ဒယ်များအတွက်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
LG G50 ကို ၀ ယ်တဲ့အချိန်မှာ LG ကယူရို ၅၀ ပြန်ပေးတယ်
အကယ်၍ သင် LG G3 ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ terminal ကိုသင်ဝယ်ယူလိုက်ရင်သင့်ကိုယူရို ၅၀ ပြန်ပေးတဲ့ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူရဲ့မြှင့်တင်ရေးအသစ်ကိုအသုံးချပါ။
LG G2: Roms Cyanogenmod3နှင့် 11S Free အတွက် LG G11 theme ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။
ဤနေရာတွင် Rom Cyanogenmod3or CM2s နှင့်အတူ LG G11 အတွက်အကောင်းဆုံး LG G11 theme ရှိသည်။
Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် LG G2 vs Moto X 2014 နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအကြားတွင်ကွာခြားမှုများစွာရှိမည်ဟုထင်ပါသလား။
ဤတွင်သင် AOSP Rom နှင့်အတူ LG G2 တွင် Quick Remote ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းအမှန်ရှိသည်။
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G3 နှင့် Moto G 2014
Androidsis အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုကို LG G3 နှင့် Moto G 2014 နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အချိန်တွင်ကြီးမားသည့်စျေးနှုန်းနှင့်ကွဲကွာနေသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုရှိသည်။
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - LG G2 နှင့် Moto G 2014
ဤတွင်သင့်အနေဖြင့်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ G2 နှင့် Moto G 2014 နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုမှုအတွက်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတွေ့မြင်ရန် LG GXNUMX နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
LG ၏ Smart Wine သည် Android မြင်ကွင်းနှင့်လုံးဝကွာခြားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည့်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း၏ရွှေခေတ်သို့ပို့ဆောင်သော terminal ဖြစ်သည်။
သင်၏ LG G2 တွင်ဘက်ထရီကိုမည်သို့ချွေတာနိုင်မည်နည်း၊ Fast Dormancy option ကိုသက်ဝင်စေပြီးမော်ဒယ်များနှင့်မူကွဲအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်
ဒီလှည့်ကွက်နဲ့အတူ ၀ န်ဆောင်မှု menu ထဲက Fast Dormancy option ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့် LG မှာဘက်ထရီကိုချွေတာတော့မယ်
LG G Vista ဗီဒီယိုဆန်းစစ်ခြင်း
LG G Vista, ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏အသစ် phablet အသစ်ဖြစ်သောစျေးနှုန်းမှာ ၃၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။
IFA 2014 မှနေ၍ သင့်ကိုကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှ LG G3 Stylus၊ အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းသစ်၏ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာပါတယ်
ဘာလင်မှာရှိတဲ့ IFA14 မှာ LG G Watch R ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
IFA 14 မှာရှိတဲ့ LG ရဲ့ပြခန်းကနေ LG G Watch R. ရဲ့ပစ္စည်းအသစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
LG G Watch အတွက်အခြေခံအားသွင်းစက်၏ Indiegogo လှုပ်ရှားမှုသည်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကြောင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း
LG G3 Stylus သည် qHD မျက်နှာပြင်နှင့် 1.3GHz quad-core ချစ်ပ်ဖြစ်သည်
LG G3 Stylus သည် LG G3 ၏အထင်ကရထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်နိမ့်သောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
LG G3 အသုံးပြုသူများသည်ပျက်စီးနေသောမိုက်ကရိုဖုန်းofရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းကြသည်
LG G3 အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ဖုန်းပေါ်ရှိမိုက်ကရိုဖုန်းထွက်ပေါက်မှထွက်ခွာလာပုံကိုကြည့်နေကြသည်
[APK] LG G2 ကင်မရာကို Slow Motion function ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကူးယူပါ
ဤတွင်သင့်တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါဝင်သော LG G2 ကင်မရာ၏ apk ရှိပြီး Slow Motion function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
LG မှ L Fino နှင့် L Bello တို့ကို G3 touch ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
LG မှဖုန်းအသစ်နှစ်ခုမှာ L Fino နှင့် L Bello တို့ဖြစ်သည်။ အနိမ့်အကွာအဝေးနှစ်ခုဆိပ်ကမ်းကင်မရာအတွက်ကောင်းသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ
LG သည် LG G3 software ၏စံအလွှာကို၎င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်ပြုလုပ်သည်
Roms LG G2: LG G7 ၏ 3Rom Port ကိုတပ်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်ခြင်း
ဒီနေ့ Roms LG G2 ကဏ္theမှာ LG G7 ရဲ့ port တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 3Rom ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး boot နဲ့ main features တွေ။
LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကို Cloudy ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည် LG G3 ၏ Port တစ်ခုဖြစ်သည်
ဤတွင် LG G2 နှင့် LG G3 တို့၏ဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှုများ၌ကတိထားခဲ့သည့်အရာသည် LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ဖြစ်သည်။ Cloudy G3 အဖွဲ့မှပြုလုပ်ခဲ့သည့် LG G3 ၏ port မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Xg အဖွဲ့ ၀ င်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Wolfgart မှ LG သည် LG ၏ Bootloader ကိုတရားဝင် Unlock လုပ်ရန်တရားဝင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
[Video-Test] LG G3 နှင့် LG G2: မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု
LG G3 နှင့် LG G2 တို့သည်ကြီးစွာသော LG Terminal နှစ်ခုကြားတိုက်ရိုက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး application များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျင်မြန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုစစ်ဆေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။
LG G3 Stylus က Galaxy Note4ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသလား။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော LG G3 Stylus သည် Galaxy Note4နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်
LG G2 Mini သည်နာမည်ကြီး LG G2 ၏ mini version ကိုဖော်ပြပေးသောကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူအတွက်လောင်းကြေးအသစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၌ LG G Vista သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်
LG G Vista ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းများအဖြစ်နိုင်ငံအများစုသို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ LG G2 international သို့ OnePlus One ၏ Rom ထည့်သွင်းပုံ
ဤတွင်သင့်တွင်ဖိုင်များအားလုံးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤသည် OnePlus One Port ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LG G2 တွင်တပ်ဆင်ရန်အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြသည်။
LG G3 ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
ဤတွင် LG G3 သည်မတူညီသောမတော်တဆကျဆုံးခြင်းသုံးခုနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နာကျင်စေသောဤခုခံနိုင်စွမ်းစမ်းသပ်မှုနောက်တစ်ခုကိုသင်တွေ့ရသည်။
LG သည် G3 Quick Circle Case နှင့်အတူပထမဆုံးကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
LG G3 နှင့် Quick Circle case တွင်ပထမဆုံးဖုန်းကိုဖွင့်ရန်မလိုဘဲကစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်
LG G2 ကို LG G3 အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်
ဒီနေရာမှာသင့်မှာအကောင်းဆုံး video LG G3 port roms တစ်ခုနှင့် LG G2 ကို LG G3 အဖြစ်သို့ပြောင်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုရဲ့ video နှင့် installation mode ကိုဒီနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
LG G3 မှာဗားရှင်းတွေအားလုံးကို root လုပ်နည်း
ဤတွင် LG G3 ပေါ်တွင် Root ခွင့်ပြုချက်ရရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ထားခဲ့မည်။ ကြိုးစား။ သေမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုသင့်အားတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသည်။
LG G3 သည်၎င်း၏ဖန်သားပြင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်မှုတို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့် terminal အဖြစ်ချီးကျူးခံခဲ့ရသည်။
LG G3 Beat ကို LG G3 ၏ mini mini version LG G3 S အဖြစ်ဤတွင်ဥရောပ၌ပြသမည်ဖြစ်သည်။
LG G3 Mini ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်တွေ့ရသည်
LG G3 Mini ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုတွေ့နိုင်သည်မှာ၎င်း၏အစ်ကိုပုံတူပင်ဖြစ်သည်။
LG G3 S သည် LG G3 Mini ဟုအမည်ပေးထားသောသုံးစွဲမှုလက်စွဲဖြင့်လေ့လာသိရှိခဲ့ရခြင်း၏အမည်သစ်ဖြစ်သည်။
LG G3၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့များနှင့်နောက်တစ်ခုကို QuickMemo + ဖြင့်မည်သို့ရိုက်ကူးရမည်ကိုပြသသည်
LG G3 Prime သည်ကိုရီးယားတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဆောင်း ဦး ရာသီသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
LG ၏ G Vista ၏ပုံရိပ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်အလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အသစ်လောင်းကြေးမှပေါက်ကြားခြင်းဖြစ်သည်
ဤတွင်သင့်တွင်ရှိသည်အရာအားလုံးနှင့် LG G3 ၏ LG Health application ကို LG G2 တွင်တပ်ဆင်ရန်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။
LG G3 + LG G Watch အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူကတော့ဖမ်းမိတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ။
LG G3 ကိုရောင်းချမှုသည်ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူတက်လာသည်။ ဒီကနေ့သူတို့နောက်ကွယ်မှာလှည့်ကွက်တစ်ခုရှိသလား၊ ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအသစ်လား၊
LG G2 ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲသိလား။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် terminal မှာနောက်ဆုံး Antutu စာမေးပွဲ၏ပြန်ဆိုချက်များရှိသည်။
LG G3 mini ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
LG G3 mini ၏ပထမဆုံးအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပုံရိပ်များရှိပြီးမကြာမီ LG မှစတင်မည့် terminal အသစ်ဖြစ်သည်။
LG G2 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုပြသခြင်းအားဖြင့် AOSP Rom ကဲ့သို့ Cyanogenmod ကို၎င်း၏ Nightly version တွင်တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
LG G3 ကိုဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အားလုံးတွင်အာရှနိုင်ငံများရှိဥရောပနှင့်အမေရိကသို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
LG G Pad သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဖန်တီးထားသောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုတွင်သင်မြင်တွေ့နိုင်သည်
LG G2 ကို Android 4.4.3 သို့ OmniRom ဖြင့် update လုပ်ပါ
LG G2 ကို Android 4.4.3 သို့ OmniRom မှတဆင့်မည်သို့အဆင့်မြှင့်မည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ပြသပါမည်။ အကောင်းဆုံးမှာ AOSP ROM များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG G2 ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
LG Smart2 ၏လိုင်းအသစ်၏အထင်ကရဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သော LG GXNUMX တွင်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုသင့်တွင်ရှိသည်။
ဤတွင်သင့်တွင် Android3ဖြင့်မည်သည့် Android ကိုမဆိုခံစားနိုင်ရန် LG G4.4.2 ၏ကီးဘုတ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Root နှင့် Recovery ကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။
ကိုရီးယား LG ၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ LG G3 ကအောင်မြင်မှုရှိမရှိယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိချင်နေပြီ။
LG G3 ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
LG G3 ကိုဖြုတ်ပြီးနောက် IFIX အဖွဲ့က LG ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောကြားခဲ့သည်
LG G3 နောက်ခံပုံများရယူပါ
ဒီနေရာမှာမနေ့ကလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Tunning Android, LG G3 နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံမျက်နှာပြင်ရောင်ခြည်သုံးရောင်ခြည်များကို Android အတွက်ချစ်သူများအတွက်သင့်ကိုချန်ထားပါတယ်။
LG G5 အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Miui V2 ကိုလက်တွေ့တွင်တွေ့ရသည်
ဤနေရာတွင် LG G5 သည်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပြီး ၁၀၀ x ၁၀၀ လည်ပတ်ရန်အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Rom Miui V2 ကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးရရှိထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်း၏စွမ်းအားကိုထင်ရှားစွာပြသနိုင်သော LG G3 နှင့်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ LG G3 သည်ယူရို ၆၉၉ ကျသင့်မည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှအသစ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ LG G Watch ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်
LG G3 ကြိုးမဲ့အားသွင်း - ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ၁၀ ​​ခု
LG G3 ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်၏ပုံရိပ်တွေဟာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြသထားပါတယ်
LG G3 ၏ Quick Circle ၏ပထမဆုံးဗီဒီယို
ဤတွင်သင့်တွင် LG G3 ၏လျင်မြန်သောစက်ဝိုင်းပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောစမတ်ကျမှု၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။